साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार इमर्जिङ नेपाल लिमिटेडको शेयरमूल्यमा सकरात्मक सर्किट लागेको छ ।
समाचार तयार पर्दा सम्म कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९९ प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किट लागेर कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ९ सय २० दशलमव ३० पुगेको छ ।
कम्पनीको हिजो रू. ८३६दशलमव ७० मा अतिम कारोबार भएको थियो। कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा २ लाख ६८ हजार ६ सय ४५ कित्ता शेयर खरीद माग रहेको छ भने विक्री माग शून्य रहेको छ ।